Vidio: Ahịa Ahịa Na-eme Ngwaahịa ahụ? | Martech Zone
Vidio: Ahịa Ahịa Na-eme Ngwaahịa ahụ?
Tuesday, August 23, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a bụ ihe dị egwu ma na-atọ ọchị ịchọta site na Frank Dale, CEO nke Ngwakọta. Amaara m n'ezie ụlọ ọrụ ole na ole ebe ahịa karịrị ahụmịhe onye ọrụ na ọrụ ngwaahịa na-enye. N'ezie, Arịrịọ m ngosi ngosi nke na-agaghị emeghe ngwa ha, kama na-arụ ọrụ nke ike na-enwu gbaa. Nke ahụ abụghị nsogbu mgbe ngwaahịa gị dị ka akpọsaara, mana ahụla m ka ọ na-adọka ụfọdụ ụlọ ọrụ iche mgbe ahịa a na-ese foto, na-eme ka ọ dị elu karịa ngwaahịa a.
Ahịa na-atụ anya atụmanya, ahịa na-akwado ha ma na-anakọta ọrụ ahụ, ndị ahịa na-egosi ya ozugbo. Nsogbu a na-agbada n'ugwu gaa na njikwa akaụntụ na ndị ọrụ ndị ahịa. Ndị otu ahụ nwere njigide dị ka otu n'ime ihe ngosi arụmọrụ ha dị ukwuu… yabụ mgbe ụlọ ọrụ ndị ahụ na-apụ ma ọ bụ na ha emeghịgharị, njikwa akaụntụ na ndị ọrụ ndị ahịa na-aza ajụjụ. Na-aza ajụjụ maka ihe na-enweghị njikwa ha.
Ọ bụ ihe ziri ezi ịme? Echeghị m ịgha ụgha ngwaahịa gị bụ ihe kwesịrị ekwesị ime. Agbanyeghị, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eme ya na-eto ngwa ngwa. Site na-eto eto ngwa ngwa, ha nwere ike merie okekọrịta ahịa, merie ego, ma tinye ya n’ime nwudo n'ihe oyiyi ahụ ha sere. Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a na-eme ọtụtụ iri ma ọ bụ ọtụtụ narị nde dollar, ọ na-esiri m ike ịsị na ọ bụ atụmatụ ọjọọ. Ọ bụ naanị ihe na-adịghị m mma. Enweghị m mmasị na ụlọ ọrụ ndị na-eme ya. Enweghị m mmasị ịkwado ụlọ ọrụ ndị a nye ndị ahịa m.
Tags: ngwaahịanjikwa ngwaahịangwaahịa ahịaRC na-egbukepụ egbukepụWhmụaka ndị Whitest amaghị
Chakwasa ihie: Marketpath CMS na Ecommerce
Aug 23, 2011 na 7:31 PM
Hahaha, “gini kpatara na onye ahia gi gha ahota ihe onunu anwuru?”
Matt Zentz kwuru
Aug 24, 2011 na 12: 21 AM
Ezigbo vidiyo Doug mana m ga-ekwu vidiyo ndị metụtara ya na-atọ ọchị ma nwekwuo mmetụta na miri ị na-amaba.